Xaqiiqada ... sano 2 9 bilood ka hor #792
Labadii bilood ee la soo dhaafay, Europe ayaa ka luntay laba shirkadood oo duulimaadyo ah oo ku dhawaad ​​in ka badan sanado 40 ah. Waxaan xor u ahaan doonaa in aan sheego in, Air Berlin ay ahayd hawadaydii ugu xiisaha badnayd ee Yurub ... nasiib daro, mar dambe maahan.
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs oo loo yaqaan airberlin ama airberlin.com, waa diyaaradda labaad ee ugu weyn Jarmalka, kadib Lufthansa, iyo diyaaradda toddobaad ee Yurub ugu weyn marka loo eego dadka rakaabka ah. Waxay haysaa xarumahooda madaarka Berlin Tegel iyo Madaarka Deldsseldorf waxayna u adeegtaa 12 magaalo oo Jarmal ah iyo sidoo kale meelaha ay ku yaalliin Yurub, Caribbean iyo Ameerika.
Air Berlin waa xubin ka mid ah isbahaysiga Oneworld, oo leh shirkadda Belair ee Switzerland, halka iibka shirkadda 49 ee shirkadda Australian ee NIKI ee Etihad Airways lagu dhawaaqay December 2016. Waxaa ku qoran liiska shirkadda Frankfurt Stock Exchange. Etihad Airways waa kan ugu weyn ee saamileyda ah, isaga oo kordhiyay hantidiisa 29.21% ee 2011. Air Berlin ayaa xarunteedu tahay Charlottenburg-Wilmersdorf, oo ah degmada Berlin.
15 Agoosto 2017 Air Berlin ayaa sheegtay in ay ku jirtay codsi ku saabsan caymis, laakiin duulimaadyadu waxay sii wadi doonaan, qayb ahaanna ay uga mahadcelinayaan deynta ay bixiso Dowladda Jarmalka.
Monarch Airlines, oo sidoo kale loo yaqaan Monarch, wuxuu ahaa kaniisad British ah iyo diyaarad hawleed oo qorsheysan oo ku salaysan Luton, kaas oo ka hawlgalay duullimaadyadii loo qorsheeyey ee ku yaala Mediterranean, Canary Islands, Cyprus, Egypt, Greece, Sweden iyo Turkey. Xarunta xarunteedu waxay ku taallaa Luton, oo leh xarumo kale oo ku yaal Birmingham, Leeds / Bradford, Gatwick iyo Manchester. Monarch wuxuu ahaa mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu da'da weyn Ingiriiska oo aan magac badelin magaciisa ka hor inta aysan joojin howlgallada. Waxay ku dhawaadey shaqaalaha 3,000 sida 1 Oktoobar 2017.
Duulimaadyadii ayaa la qaaday rakaabkii 5.7 ee rakaabka intii lagu jiray 2015, oo ah 19% hoos u dhiganta 2014. Monarch waxay ku dhowdahay in laga helo 2018 markii ugu horeysay ee 45 cusub Boeing 737 MAX-8. Kuwani waxay ugu dambeyntii badali lahaayeen gawaarida hadda ee A320 iyo A321. Shirkaddu waxay haysataa Shahaadada Ganacsiga ee Hay'adda Ingiriiska (CAA) Nooc Ganacsi Nooc ah, u oggolaanaysa inay qaadaan rakaab, xamuulka iyo boostada diyaaradaha leh 20 ama kuraas ka badan.
Monarch wuxuu maamulay 4: 30am on 2 Oktoobar 2017, oo joojiyay hawlgalladii saameyn deg deg ah, ku dhawaad ​​hal sano ka dib markii xadhiggii ugu xumaa uu noqday mid baahsan. Websaytka shirkadda diyaaradaha ee hadda waxaa maamula CAA, iyo shirkadaha iyo shaqooyinka shaqaalaha ee ay maamusho KPMG.